Deynkaagu wuu ku jiri karyaa waxyaabaha qarsoodida ah | Kronofogden
Deymankaaga annaga agteenna waa laga dhigi karaa kuwo qarsoodi ah. Xitaa kiisas kale oo noo kaa agyaal wey khuseyn kartaa taasi, tusaale ahaan in guri lagaa saaray (guri khasab lagaaga saaray). Markaas macluumaadka cid kasta iskama heli karto. Waxay taasi ka dhigantahay in aanan macluumaadka cid kale siineynin.
Maxaad sameyn kartaa si aad u heshid in waxaaga la qariyo?
Ma codsan kartid in waxaaga sir laga dhigo. Deynka si ootomaatik ah ayaan sir uga dhegeynaa haddii shuruudaha qaar la buuxiyo. Haddii deynka laga dhigo mid qarsoodi ah waa la tuurayaa macluumaadka ay hayaan shirkadaha deymanka ka warbixiya.
Maxay yihiin shuruudaha ay tahay in la buuxiyo?
Waa deymanka Kronofogden u yaalla in ay khasab ku ururiso kuwa sirta laga dhigayo. Laga billaabo 1 diseember 2018 waa la beddelay xeerarka wax sir ka dhigidda.
Shuruudaha soo socda waa in la buuxiyo si macluumaadka deynka ku aaddan sir looga dhigo:
In aysan jirin wax deyman ah oo la diiwan geliyay labadi sano ee ugu dambeeyay.
In aad bixisay lacagti deynka ahayd, oo ay ku jiraan dulsaarka, lacagihi ganaax ah ee laga yaabo in ay jiraan iyo lacagti asalka ahayd, amaba in kiiskii ay la noqotay ciddii dooneysay in lacagta loo mego.
In aan labada sano ee xiga laguugu yeelan wax deyn cusub ah ka dib marka deynka sir laga dhigo.
Haddii aad waqtiigi ogeysiinta ku bixisay deynka la xiriira tusaale ahaan canshuur aan la bixin, lacagta waalidka aysan carruurtu la joogin uu bixiyo ama ganaax (deymanka dowladda) waxay macluumaadka deymankaasi mar walba ahaanayaan ku qaarsoodi an. Taasi waxay khuseysaa oo keliya dadka shacabka ah, taasoo loola jeedo dadka shacabka ah ee aan ganacsatada ahayn, waxayna khuseysaa oo keliya deymanka dowladda, degmooyinka ama maamul gobaleedyada ee annaga Kronofogden ah naga ag diiwaangashanaa 1 diseembar ee 2018.
Xeerarka sirtu xitaa wey khuseeyaan haddii ay deyman kale yimaadaan labada sano ee xigta. Haddii aad deynkaagi bixisay markii uu dhamaaday waqtigi ogeysiintu ka dib ee uu deyn kale ku galo qarinta deynkaagi hore waxay meesha ka baxeysaa ugu horreyn haddii aadan deynka cusub ku dhiibin waqtigi ogeysiinta.
Macluumaad aan marnaba sir laga dhigi karin
Waxaa sidoo kale jira macluumaad ay hayso Kronofogden oo aan sir laga dhigi karin. Waxay kuwaasi khuseeyaan deymanka ay leeyihiin dadka shacabka ah iyo shirkadaha. Deymankaas annaga ayaa meel isla dhigeyna annagoo ka gaareyna, waxa loogu yeero go’aan xukun ah. Go’aan xukun ah abidkiis lagama dhigi karo qarsoodi.
Sidoo kale go’aannadeenna, tusaale ahaan warbixinnada ku aaddan baaritaankeenna xagga hantidaada ama go’aan ku aaddan qaan sheegashada, lagama dhigi karo qarsoodi. Go’aamada noocan ah waxaad uga fogaan kartaa in aad si degdeg ah u dhiibtid deymanka si aanan ugu baahan in aan sameyno wax baaritaan ah.
Maxaa dhacaya haddii aadan shuruudaha buuxineynin?
Haddii aadan shuruudaha buuxineynin deymankaagu cid walba wey u furanyihiin.
Macluumaad dheeraad ah iyo liis ay ku qoranyihiin shirkadaha ka warbixiya deymanka waxaad ka heleysaa barta intarneetka ee Integritetsskyddsmyndigheten.